अस्कर अवार्डमा रमी र ओलिविया उत्कृष्ट अभिनेता-अभिनेत्री « THULOPARDA.COM: Entertainment News Portal From Nepal
अस्कर अवार्डमा रमी र ओलिविया उत्कृष्ट अभिनेता-अभिनेत्री
सोमवार अमेरिकाको डल्बी थिएटरमा आयोजित ९१ औं अस्कर समारोह भव्यताका साथ समापन भएको छ । अवार्डमा बेस्ट चलचित्रको अवार्ड ‘ग्रीनबुक’ लाई दिइएको छ । यस्तै, बेस्ट लिड एक्ट्रेसको अवार्ड ओलिविया कोलम्यानले हात पारेकी छन् । उनलाई यो अवार्ड ‘द फेभरि’ मा सानदार अभिनयका लागि दिइएको हो ।
‘बोहेमियन र्‍यापसोडी’ का लागि रमी मालेकले बेस्ट लिड एक्टरको अवार्ड चुमेका छन् । यो वर्ष ‘रोमा’ लाई सबैभन्दा बढी १० अलग-अलग क्याटगरीमा नोमिनेट गरिएको थियो । यसले पहिलो अस्कार अवार्डको इतिहासमा ‘अल अबाउट इभ’, ‘टाइट्यानिक’ र ‘ला ला ल्याण्ड’ भन्दा बढी नोमिनेशन भएको फिल्म बनिसकेको छ ।
उत्कृष्ट निर्देशकको अवार्ड ‘रोमा’ बाट अल्फोन्सो क्यूरोले उचाले भने स्पाइक लीले एडप्टेड पटकथा विधामा ‘ब्ल्याकान्सम्यान’ बाट अवार्ड जिते । यस्तै, ओरजिनल स्क्रिनप्ले भने ‘ग्रीनबुक’ को पोल्टामा गयो । बेस्ट एनिमेटेड फिचर फिल्मको अवार्ड ‘स्पाइडर म्यान : इनटू द स्पाइडर वर्स’ ले उचाल्दा बेस्ट सपोर्टिङ एक्टरको विधामा फिल्म ‘ग्रीनबुक’ बाट मरशैला अलीले अवार्ड चुमे ।
बेस्ट सपोर्टिङ एक्ट्रेसको अवार्ड ‘इफ बील स्ट्रीट कुड टक’ बाट रेजिना किङले जितिन् । भने, बेस्ट फरेन ल्याङ्ग्वेज फिल्मको अवार्ड ‘रोमा’ ले उचाल्यो । बेस्ट सिनेम्याटोग्राफीको अवार्ड पनि ‘रोमा’ बाटै अल्फान्सो क्वारोनको हातमा पर्‍यो । लेडी गागाले भने ‘अ स्टार इन’ बाट ओरजिनल गीत विधामा अवार्ड जितिन् ।
विजेताहरुको नामावली यस्तो छ :-
9. Best Original Score
12. Best Documentary Feature
15. Best Production Design
21. Best Documentary Short Subject
23. Best Live Action Short Film